Maxaa kasoo baxay mooshinkii la hor geeyey xildhibaanada BF Somalia? - Caasimada Online
Home Warar Maxaa kasoo baxay mooshinkii la hor geeyey xildhibaanada BF Somalia?
Maxaa kasoo baxay mooshinkii la hor geeyey xildhibaanada BF Somalia?
Muqdisho (Caasimada Online) – Kulan ay maanta lahaayeen baarlamaanka dowladda faderaalka ayaa waxaa lugu joojiyey mooshin ka dhan ah Isbedel Ku Sameynta Gudiyada Joogtada.
Kulankii shirka oo uu u furay guddoomiye kuxigeenka koowaad ee baarlamaanka Mudane Jeylaani Nuur iikar ayaa xildhibaannada u sharxay ajandaha kulanka ee maanta oo ku saabsanaa in la ii ambo qaado dooda la xiriirta mooshin ay soo gudbiyeen xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka oo ahaa in la muddeeyo xilka gudiyada joogta ah ee baarlamaanka.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dooda kaddib ku dhawaaqay natiijada xildhibaanada codeysay ayaa sheegay in ay u codeysay 133 mudane, ayna jiraan xildhibaano aan cod siinin.
“Tirada guud ee xildhibaannada u codeysay mooshinkaan ayaa ah 133 mudane, iyadoo 10 mudane aan codkooda dhiibanin, taasi oo tirada guud ay ka dhigtantahay 143 mudane, waxaa ogolaaday in mooshinkaasi lagu kordhiyo xeer hoosaadka 21, waxaa diiday 88, waxaana ka aamustay 24, tirade guud ee codeysay waa 133 mudane, sidaa daraadeed sida uu qabo qodobka 84aad ee xeer hoosaadka baarlaamaanka mooshinkaan meel mar ma ahan” ayuu guddoomiyaha hadalkiisa ku daray.
Waxaa ay baarlamaanku ku ballaamen maalinta berito oo arbaco ah ay inay ka dodi doonaan habka nidaamka axsaabta dalka, oo guddoonka baarlamaanka kal hore u iclaamiyay in nidaamka axsaabta laga dooni doono si sanadka 2016-ka dalka laga hirgeliyo doorasho xor ah oo ay ka qeyb qaadan karaan dhamaan nidaamka axsaabta.